Tuniisiya - Basma Khalfaoui: "Khilaafka lacagta ayaa ah caqabadda ugu weyn ee laga hor tagi karo" - JeuneAfrique.com -
ACCUEIL » SIYAASADDA Tunisiya - Basma Khalfaoui: "Muranka lacagta ayaa ah caqabadda ugu weyn ee laga hor tagi karo" - JeuneAfrique.com
Carmal oo ah hogaamiyaha bidix Chokri Belaïd, oo la diley 2013, qareenka Basma Khalfaoui wuxuu ka soo muuqanayaa degmada Tunis 1 doorashadii baarlamaanka ee 6 Oktoobar. Waxay u soo jiidataa himilooyinkeeda siyaasadeed ee dhalinyarada Afrika, laakiin sidoo kale waxay leedahay cilladdii kacaankii iyo baaritaanka la xiriira geerida ninkeeda.
Bilowgii xilliga kala guurka ee Tunisia waxaa xusey rabshado siyaasadeed, oo ay ka mid yihiin dilkii Chokri Belaid. Carmallada tan dambe, Basma Khalfaoui, hal mar buu ahaa calanka xisbigiisa, ka hor inta uusan ku biirin isbahaysi cusub. Maanta waxay nolosheeda la wadaagaysaa inta u dhaxaysa raadinta runta iyo go'aan qaadashada siyaasadeed.
U dood iyo u ololeeya, waligeed ma joogsanin raadinta halganka siyaasadeed ee ninkeeda dambe. Markii ugu horreysay, iyadu waa markii ugu horreeysay doorashada sharci dejinta, ee degmada Tunis 1, oo hoos timaadda sumadda Ururka Midnimada Dimuqraadiga (UDS).
Jeune Afrique: Tan iyo markii la diley saygaaga, waxaad markii ugu horeysay militariga ku jirtay xisbigii uu ahaan jiray xoghayihii guud iyo afayeenka, Watad (xisbiga mideysan ee Dimuqraadiyiinta Dimuqraadiga ah), kahor intaadan si ku meelgaar ah uga dhaqaaqin siyaasada. Maxaa doorashadan?
Basma Khalfaoui: Hadafkeygii ugu horreeyay dhimashadii Chokri ka dib wuxuu ahaa inaan ogaado runta ku saabsan duruufaha dilkiisa. Waxaan rabay in dhamaan qeybaha bulshada inay ku kulmaan gudi difaaca, arintaasina ma aheyn arinta Watad. Marka waxaan uga tegey 2015 inuu sii wado guddiga difaaca qoyska. Naftayda ayaan u hibeeyay hawshan iyo gabdhahayga. Waxaan u baahanahay wax intaa ka badan si aan tallaabo uga qaado goortaas wakhtigaas, meesha siyaasaddu waxay ahayd burcadnimo.
Ka dib waad ku biirtay dhaqdhaqaaqa "Tunisia ka hor", ka hor inta uusan ku biirin UDS. Ma u malaynaysaa in isuduwidda duruufahaani inay sii socon karaan wixii ka dambeeya doorashooyinka ?
Tunisiya waxay ka hor timid midow aan ku qanacsaneyn xisbiyada waddaniyiinta ah waxayna qabatay mashruuca Chokri. Bishii Febraayo 2019, howl-wadeyaasheeda ayaa iga codsaday inaan gudoomiye u noqdo shirkooda. Waxaan diyaar u ahaa inaan dib u bilaabo booskeyga goobta siyaasada. Ujeeddadu waxay ahayd in la mideeyo dhowr qaab oo ku saabsan barnaamij caadi ah, oo iska fogeeya kibirkayada.
Waxaan u maleynayaa sameynta isbahaysiyo waa qeyb caadi ah oo ka mid ah howlaha kala guurka
Marka hore Tunisiya ka hor, ka dibna Midowgii Dimuqraadiga iyo Bulshada, oo isu keenta waxyaabo loo yaqaan Al-Massar, Joumhouri, Dhaqdhaqaaqa Dimuqraadiga hantiwadaaga, ama kooxda bulshada rayidka ee Qadiroune. Waxaan u maleynayaa in dhisidda isbaheysi ay qayb caadi ah ka tahay hannaanka kala-guurka. Muranka Ego waa caqabadda ugu weyn ee laga hor tago.
Waxaad muujisay ujeeddadaada inaad u soo bandhigto doorashooyinka sharci-dejinta ee degmada Tunis 1. Tani waxay noqon doontaa ololihii ugu horreeyay eeaga shakhsi ahaaneed. Waxaad ka reebtay xulashadan 2014, markaa maxaad hadda u gudubtaa?
Maxaa yeelay diyaar ayaan ahay. Fikradayda, baarlamaankii hore ma uusan u hogaansanayn filashooyinka siyaasiyiinta iyo dadka. Qareen ahaan, waxaan rabaa inaan ka qeyb qaato istiraatiijiyad siyaasadeed oo dhan dhaqaale iyo bulsheed iyada oo loo marayo qoritaanka sharciyada Golaha. Kaliya ma doonayo inaan ku qaato noloshayda inta ka haysa naqdinta.
Mudaaharaad ka dhacay Tunis, 23 Oktoobar 2013, oo ku baaqaya is casilaadda dowladda (muuqaalka sawirka). Photo AP Photo / Hassene Dridi
Sideed sano kadib kacaankii, waa maxay qiimeyntaada ku saabsan kala guurka dimoqraadiga?
Waxaan ku jirnaa geedi socod aad u adag, aadna uga fog himilooyinka kacaanka kuwaas oo ahaa amniga, dhaqaalaha iyo xasilloonida bulshada, laakiin sidoo kale sharaf. Dhinacyada xukunka haya tan iyo 2011 ma aysan hubin inay abuuraan isku-dheellitirnaan cusub. Waxay la xiriirtaa la'aanta dhaqaale istaraatiijiyadeed. Hase yeeshe, waxay diiradda saareen shenaniganska iyo khilaafaadka, ama samaynta nooc dib-u-heshiisiin ah nidaamkii hore, iyagoo adeegsanaya astaamaheeda, iyaga oo aan ku dhaqaaqin tallaabooyinka lagama maarmaanka ah sida codsashada cafiska.
Si kastaba ha noqotee horumarka ayaa laga gaadhay heer hay'ad ahaan. Qaabka hadda jira ma u muuqdaa mid xoog badan oo ku filan difaaca dimuqraadiyadda?
Maya, maxaa yeelay nidaamkan waxaa loo sameeyay in lagu cabiro kuwa awooda. Dabcan, waxaa jiray diyaarinta Dastuur cusub, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo ka bannaan qoraalka oo qodobbada qaar u furaya mararka qaar fasiraadaha halista ah.
Xaqiiqda ah in ciidanku lug ku lahayn goobta siyaasadeed waa hanti. Abuuritaanka Maamulka Sare ee Hay'adaha Doorashooyinka (Isie) sidoo kale waa wax fiican. Si kastaba ha noqotee, hay'ado badan ayaa wali la la'yahay, sidii Maxkamad Dastuuri ah.
Nooc siyaasadeed oo noocyo badan leh ayaa bilaabmaya dhisida laftiisa. Miyaad u malayn in dhinacyada ay ka adkaan doonaan kala qeybsanaantooda gudaha?
Xornimadii kadib, Tuuniisiya waxay soo martay wakhti yar oo jahwareer siyaasadeed ah. Laakiin wax waliba si dhakhso ah ayaa loo xakameeyay, sidaa darteed markaa waxaan in ka badan konton sano ku qaadanay xukunka xisbiga keliya. Sideed sano aad ayey u yar tahay in la dhiso nolol wadaag ah. Kala qeybsanaanta waa waajib.
Chokri Belaid, Xoghayaha Guud ee Xisbiga Dimuqraadiga Patriots, ee 2010. Ass Hassene Dridi / AP / SIPA
Qaybinta garsoorka ee baaritaanka dilkii Chokri Belaid waa mid aad u culus oo dhaawaceysa runta
Waxaad u dagaallamay si aad u hesho runta ku saabsan dilka ninkaaga, Chokri Belaid, iyo cambaareyso gaabinta. Aaway sahankii?
Asal ahaan, faylka ayaa loo qaybiyay oo laga helay qolal kala duwan. Booskani waa mid aad u culus oo waxyeello u leh runta. Gaabinta ayaa umuuqata mid loogu talagay. Waxaan aaminsanahay in garsooraha ugu horreeya ee baara, Bashiir Akremi, sida kuwa kale, uu kadhigo Ennahdha. Gudiga difaaca kaliya maahan shaqo sharciyeed, laakiin shaqo badan oo baaritaan ah. Waxaan dhalleeceynay jiritaanka qalab la mid ah amniga oo ka dhex jira Ennahdha. Waxaa jirta diidmo awooda siyaasadeed marka la fiiriyo baahida loo qabo in la qabto arrintan.
"Hadafkeygu waa inaan soo celiyo kuwii qaldamay sidii aniga oo kale oo aan ku soo noqdo Jamhuuriyadda"